Posts posted by Barwaaqo
‘Calaa geelii ba’ay’ , maahmaahdani waxay ku timi; Oday qurbo jooga ah baa reer Dan yar geel u dhiibtay , isagoo shuruud kula galay inay manaafacadsadaan , maalintuu u baahdanna uu Geeliisa la wareegayo. Geelaa waxa raaci jiray oo dhaqaalayn jiray wiil Cali la yidhaah oo ku garaadsaday isagoo geelaa reerkoodu leeyahay. Hadaba maalintii geelii uu la wareegay xaqlihii , Cali wuu murardilaacay oo u qaadan waayey. Sidaasaay maahmaahdu ku baxday . U badi inay reer Burco ahaayeen.
Hada Saalax muxuu shaqo ka dhigan?
Innaa Lillaahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun, Alle naxariistiisa janno ha ka waraabiyo marxuumadda. Ilaahay Samir iyo iimaan ha siiyo caruurteedda , waalidkeed , ehelkeed iyo dhamaan ummadda Somaliyeed, amiin.
Iftiin-damiye Alle umadda ha ka qabto, aamiin,
Hanayn baan u jeeday, hambalyanna way noqon kartaayoo , qoraalkiisu wuxuu ku aadanaa in uu ku faraxsan yahay Somaliland guusheedda.
Cigaal Shiidaad: “Naftu waa malab oo way macaan -tahay’e war soow laxdu na cuntee “
Farmaajo: “Naftu waa malab oo way macaan -tahay’e war soow rashku /fireworks-ku na dilee”
Allahayow nin daacadda
Allahow nin daalinna/xaasidda ;deeqdaadda haw simin.